कहिले खुल्ने भयो त ज्योती लाइफको आइपिओ ? | खुल्लापाना
कहिले खुल्ने भयो त ज्योती लाइफको आइपिओ ?
खुल्ला पाना २०७७ फागुन १४, शुक्रबार (१ साल अघि) ८ पटक पढिएको
काठमाण्डौ, १४ फागुन ।
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण शेयर खुल्ने तिथी तय भएको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले फागुन २३ गते देखि सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
इन्स्योरेन्सले ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६६ लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्सले निष्काशन गर्न लागेको कुल ६६ लाख कित्ता शेयरमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ३३ हजार कित्ता कर्मचारीहरुलाई र अर्को ५ प्रतिशत सामूहिक लागनी कोषहरुलाई सुरक्षित गरेको छ । सर्वसाधारणले बाँकी ५९ लाख ४० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीले कुल जारी पूँजीको ३० प्रतिशत प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको हो । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । आईपीओ बाँडफाँटपश्चात इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
सो आइपीओमा छिटोमा फागुन २८ गते र ढिलोमा चैत ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि ६६ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
शेयरपाना सम्बन्धि थप
लामो समयपछि आयो यो साधारण शेयर
नेप्सेमा मध्यभोटेकोसीको शेयर सुचिकृत
न्यादी र सामलिङ्गको शेयर नेप्सेमा सुचीकृत
यसरी हेर्न सकिन्छ मध्यभोटेकोशीको नतिजा